Calendar 2014 “Botanical Life” Kalendari - Dhizaini magazini
Kalendari Botanical Hupenyu ndeyekarenda inoratidza yakanaka chirimwa hupenyu mune imwechete pepa. Vhura pepa uye uise pachigadziko kuti unakirwe nemhando dzakasiyana-siyana dzepop-ups. Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine simba rekugadzirisa nzvimbo uye kushandura pfungwa dzevashandisi vayo. Vanopa kunyaradza kwekuona, kubata uye kushandisa. Ivo vanozadzwa neakareruka uye chinhu chekushamisika, inovandudza nzvimbo. Zvigadzirwa zvedu zvepakutanga zvakagadzirwa zvichishandisa pfungwa yeUpenyu neKugadzira.
Zita rechirongwa : Calendar 2014 “Botanical Life”, Vagadziri zita : Katsumi Tamura, Izita remutengi : good morning inc..
Kalendari Katsumi Tamura Calendar 2014 “Botanical Life”